လဲဖြစ်တဲ့မကွေးဝင်းမြင့်ကတော့ ဘဲ သတ္တဝါဟာရွှံ.နွံအပုတ်အစပ်စားပြီးရေစပ်မှာနေတာမို.
တာရယ် ၊ ကြိုက်တာရယ်ကြောင့်မျက်စိမှိတ်ပြီးဝယ်လာလိုက်တယ်။
ချက်လိုက်ပါတယ်။အရိုးကိုတော့slowcookerနဲ.ပြုတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စား၊ မစားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။
၂တောင့်၊ စပ်တဲ့ငရုတ်သီး၅တောင့်ရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၃မွှာ၊ မျှင်ငပိ ၁ ဇွန်း၊ ဆား၊ ခရမ်းချဉ်သီး
ကြီးလျှင်တခြမ်းသေးလျှင်တစ်လုံး၊ ဆီ၃၊၄စက်ထဲ့ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီးသမအောင်မွှေပါ။
စားတဲ့အခါ ရင်မပူအောင် သကြားနဲနဲထဲ့ထောင်းပါ။ သကြားမများပါစေနဲ.နော် ချိုစပ်ကြီးက
စားလို.မကောင်းဘူး။ ဒီမှာက စပ်တဲ့ငရုတ်သီးက အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်က မစပ်ဘူး။ ဘဲသား
စားပြီးမှ အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီးဖြေဆေးတွေသောက်လိုက်ရပါကြောင်း။ နောက်တခါ
Posted by Aunty Oo at 00:05
rose 25 August 2011 at 00:25
ဟုတ်တယ်နော်း) အန်တီပြောမှ သတိထားမိတယ်။ "ဘဲ သတ္တဝါဟာ ရွှံ.နွံအပုတ်အစပ် စားပြီး ရေစပ်မှာ နေတာမို.
အအေးစာဖြစ်လို့ ကြေခဲတယ်၊ အသက်ကြီးသူတွေ မစားသင့်ဘူး"
အရင် မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကဆို ဘဲတွေမွေးထားတဲ့ နေရာမှာ တွေ့ခဲ့တာ ဘဲတွေက ရွှံ့ဗွက် အပုတ်တွေကို နှုတ်သီးနဲ့ ကော်ကော်ပြီး စားနေတာ... ဟီးးး။ ဘဲသားက စားလို့တော့ ကောင်းတယ်နော်။ ကြံမဆိုင်ဆိုတာ မုန်ညှင်းချဉ်နဲ့ အတူတူပဲနော်... ဟုတ်လား အန်တီ။
Aunty Oo 25 August 2011 at 01:26
Iora 25 August 2011 at 09:53
ချက်စားရင်ကောင်းမလားတွေးနေတာ။ ခုတွေ့ လိုက်တော့ စားချင်စဖွယ်နဲ့ ချက်ဖြစ်ဘို့ များပြီ။
Iora ရေ တို့တော့ဝယ်ပဲစားရမယ်ထင်တယ် တယောက်ထဲစားရမှာဆိုတော့ ချက်ရမှာသိပ်ပျင်းတာ။အဲ သိပ်လဲမချက်တတ်တာလဲပါတယ် ဟီး။အန်တီဦးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Anonymous 25 August 2011 at 21:43
Thet Nandar Family 25 August 2011 at 22:18
̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡._______________〰〰〰〰۩〰۩〰〰☼〰〰◥▄☰▄◤〰
ဘဲသား နှင့် ကြံမဆိုင် တကယ် စားချင်ပါတယ်။ :)
ဘေဘီ 26 August 2011 at 03:51
ဘဲကင်တို့ ပီကင်းဘဲကြော်တို့တော့ ကြိုက်ပေမဲ့
ချက်တာ မစားဖြစ်ဘူး။ ကျေးဇူးရှင်က ချက်တာကြိုက်တယ်
အချိုချက်ဆိုတော့ ကောင်းမှာနော်။ အန်တီ့ ငရုပ်သီးထောင်းက
Aunty Oo 26 August 2011 at 20:23
Anonymous 28 August 2011 at 15:36
ဘဲပေါင်းနဲ့ကြံမဆိုင်ကတော့ လိုက်ဖက်တယ်။ ဒီမှာလည်း မုန်ညင်းချဉ်စစ်စစ် မရှိတော့ ကြံမဆိုင်ကိုပဲ မုန်ညင်းချဉ်အစားထိုး စားကြရတယ်လေ။ ဒါနဲ့ အအေးစာက အပူစာထက် လူနဲ့တည့်တယ်လို့ မှတ်ဖူးတယ် အန်တီ... ဥပမာ.. အခါးကိုလူနဲ့တည့်တယ် စားပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် တမာ၊ ကြောင်လျှာလို အပူခါးက လူနဲ့မတည့်ပဲ ခွေးတောက်၊ ကြက်ဟင်းခါးလို အအေးခါးကမှ လူနဲ့တည့်တာဆိုသလိုပေါ့။